Villa Biljana 3 * (Budva, Montenegro): incazelo ehhotela, izilinganiso
Uma ufuna namaholide wakho nge ingqalasizinda kakhulu, benze inkonzo enhle, abanethemba ukuthola nje iholidi beach, kodwa futhi ukuvakashela izindawo zomlando namasiko, banake Montenegro. Lokhu resort emangalisa ogwini Adriatic. Montenegro kumephu libukeka isimo encane, asemingceleni iCroatia, iSerbia, Bosnia and Herzegovina. kwenkundla Picturesque, amabhishi ehlanzekile ububanzi, nasemanzini ulwandle, inala ezikhangayo ukuheha izivakashi ezivela emakhoneni ezahlukene wonke. Eminyakeni yamuva, kakhulu kwakhulisa isithakazelo baseRussia kule ndawo. The yokungcebeleka ethandwa kakhulu futhi odumile Montenegro kuyinto Budva, lapha uthanda ukuchitha amaholide abo baseRussia. Izinketho yokuhlala baningi: ehhotela, a Bungalow ehlukile, ifulethi noma villa. Kukhethwa kuncike ngokuyinhloko izintandokazi zezivakashi namakhono sabo sezimali. Cishe wonke amahhotela e Budva inganikeza service enhle futhi izindawo kakhulu. Kodwa uma ufuna ukhethe best, uhambo ezinhle eside ukuze uthole ukwazi Izibuyekezo yangempela zezivakashi.
Villa Biljana 3 * - zithandwa phakathi izivakashi inketho ngesilinganiso okuhle. Kodwa lokho izimo ke ongakunika uphumule? Sikunikeza umbono eningiliziwe le ndlela.
Montenegro kumephu izwe libukela isimo ezincane kakhulu, kodwa ke akuphazamisi ukuthandwa resort, zonke into ebaluleke kakhulu ukuthi udinga iholidi ephelele - ulwandle, ilanga nengqalasizinda evuthiwe - lumelwe lapha ngobuningi obanele. Ngakho, uma ukhetha iholidi onokuthula okuphumuzayo, ufuna kude kusukela maphakathi nedolobha, Villa Biljana 3 * wena oyingqayizivele zizwana kahle.
Akuyona indawo embi ka villa ngabaningi njengoba inzuzo ebaluleke kunazo zonke. Yonke ingqalasizinda ungaphakathi ukuhamba ibanga, kuhlanganise izitolo ezincane, izitolo ezidayisa izinto eziyizikhumbuzo, Amabhikawozi, amathilomu nezindawo zokudlela.
Udaba lokuhlolwa kwesifo zokuhlala ohlelweni lokunakekela Igumbi yazo zonke holidaymakers. Ngiyavuma, ngemva kwendiza kuyakhathaza ufuna hlambi ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuthatha, uhlele izinto, bese uqala ukuthola indawo. Ngakho esingakunikela Villa Biljana 3 *? Izibuyekezo zezivakashi ukugxila wokwamukela izihambi womnini-Sebawoti. Phuma isikhathi, njengoba kwezinye amahhotela kakhulu futhi resort amahhotela, uqala at 12 ekuseni, Nokho uma kukhona mahhala futhi ukulungele ukuhambisa emakamelweni entsha, izivakashi akha ngaphambi umnqamulajuqu.
Villa Biljana zamagumbi 3 * 12 ethulwa ukhululekile ejwayelekile amakamelo. Igumbi ngalinye lingaba abantu ababili. Ukuze nokugcina obupholile ezimnandi ihlangabezana imishini HVAC yesimanje. izivakashi eziningi uqaphele amandla okusezingeni eliphezulu air conditioner, okuyinto ngezinsuku zikhathi epholisa emoyeni egumbini lokushisa kusengaphambili. Lapha ungakwazi ukubona isiqandisi, i-TV satellite, kanye nekamelo lokugezela yangasese. Ekuseni yokuphumula e Budva (Villa Biljana 3 *) uzokwazi ukuphuma ungene emphemeni futhi ujabulele umsindo emadlambini, emphemeni iwukuba abaningi indawo ekahle kusihlwa ukuzijabulisa. Kodwa ayitholakali kuwo wonke amagumbi the villa - kumele ube esiteji ukubhuka ukucacisa khona yayo, ukuze singathwesi udumazeke useshonile.
Ifenisha amakamelo nesizotha, kodwa ebukekayo. Zonke beshiya isiminyaminya nesiphithiphithi sasemadolobheni uzokwazi ukusebenzisa iqoqo izitsha, izinkomishi ethulwa, izibuko uphuzo, Cutlery kanye i yokucela kagesi. Ifenisha egumbini has a embhedeni, ikhabethe, itafula, izihlalo - nesizotha, kodwa okwanele ukuhlala ukhululekile.
Abanye amaholide esekhala wawuhamba amanzi ashisayo Villa Biljana 3 *. Kodwa le nkinga isixazululekile ngokushesha impela isikhalazo nokuphathwa. Uma ukuhlola egumbini, amaholide uzothola amathawula, kodwa, njengoba siqinisekiswa, amaholide, bona ngokulambisa babe ngokwanele ukuze ome off. Bonke abathandi amathawula ezinkulu, kungcono uzithatha naye. Soundproofing - hhayi ohlangothini esiqine ehhotela uma ungathola omakhelwane ezinomsindo, ngesikhathi sokuthula nokuzola egumbini ukubala nje hhayi zinkulu. Kwangathi abaphazamisa ukuthula futhi imishini, ezokuthutha zomphakathi.
Villa Biljana 3 * inikeza yokuhlala ngaphandle ukudla, kodwa villa ifakwe ekhishini nice isiqandisi, isitofu, zikagesi zasendlini encane, iqoqo izinto ezidingekayo, Cutlery - I-ukudla okuqinile inhlangano "Abane". Ukudla kwasekuseni uhlale kungenzeka villa, kodwa ukudla kwasemini kanye dinner - kwelinye amathilomu wendawo noma zokudlela. Ekhishini kuyinto enhle, izingxenye ezinkulu kanye namanani kukhona impela ezingabizi - elambile ngokuqinisekile kungabikho muntu. Yokuntuleka kokudla, abaningi nomuzwa wokuthi kusimo, kodwa kulokhu izivakashi kungukuthi exhunywe ehhotela, Ungahambisa ngokukhululekile azungeze umuzi kanye resort usuku lonke, ukuhlangabezana cuisine kazwelonke.
Eliseduze Slovenska Beach ngokwesilinganiso imizuzu 10-15 uhambo. Ngenkathi kukhona eziningi izivakashi, ngakho abathandi uthule futhi ukuba yedwa kungcono ukuya ebhishi Mogren. Itholakala ngasedolobheni ubudala esimweni olunothile. Ngo Montenegro, emabhishi yesihlabathi amatshe, kodwa ahlanzekile kakhulu nge entry mnene emanzini. Zonke izivakashi abeza Montenegro beze okokuqala, bawabulala emanzini acwebile ne ahlukahlukene zezinto eziphila emanzini.
Nge zonke bangenise uwayehlalise we izivakashi villa akhononde ukungcola egumbini, noma kunalokho, ukuntuleka yokuhlanza. Iningi lalabo abathatha uhlangothi wakhetha 3 * Villa Biljana, ukuhlala isonto ehhotela izikhathi ezimbalwa abonile abasebenzi egumbini labo. Yokuhlanza ukususwa doti futhi esikhundleni amathawula kanye amashidi. Ngeshwa, kuphela amaholide ambalwa ziye zaphawula khona yokuhlanza ezimanzi, okuyinto nengamukeleki uma kulesi sigaba kwehhotela. Uma ungenalo ukukhumbula leli qiniso, futhi ungakwazi bahlanze egumbini bebodwa, ngesibindi Bhuka le ndlela.
Reception usebenza ubusuku nemini: yimiphi imibuzo, izivakashi zingathola njalo usizo izisebenzi esinenhlonipho futhi benobungane.
Villa Biljana 3 * (Montenegro, Budva) has bokwenza ezithile, kodwa iningi lalabo izivakashi owachitha amaholide abo lapha, zazinzima uyajabula. Lokhu siyindlela olukhulu kulabo izivakashi abahlela ukuchitha ubusuku ehhotela.
I-Citymax Hotel Al Barsha (United Arab Emirates / Dubai): izithombe zeholide nokubuyekezwa
Ihhotela "Compound" (Tula, emgwaqweni Zhukovsky, 9): incazelo, ukubuyekezwa
Petersburg, ihhotela "Okhtinskaya": incazelo, izithombe, izibuyekezo zezivakashi
Ihhotela D Varee Mai Khao Beach 4 * (Phuket, Thailand): incazelo, izithombe kanye nokubuyekezwa.
Ihhotela Mersoy Exclusive Aqua kuyona (Turkey / Marmaris): izithombe kanye nokubuyekeza
Ihhotela Atlantica Holiday Village Kos 5 * (Kos, Greece): ukubuyekezwa, izincazelo, izinombolo kanye nokubuyekeza
Hussar isembatho: izici, umlando kanye namaqiniso ezithakazelisayo
Lokho eqanjiwe ukubona: kukhethwa amazambane kusofa
Hlobo luni uwoyela batheleka uhambo-ngemuva? nenqubo yokukhethwa
Kumiswa pepper e greenhouse futhi endle
Yikuphi Vitamin luvame izinhlanzi? Kungani kuwusizo ukudla inhlanzi?
Ukwakheka Okuvamile: izimfihlo izintandokazi ngokuwina nobuchwepheshe
Izimfihlo ze-Windows 7: Ungakukhubaza kanjani ifayela lokushintshanisa futhi yini engayisongela?